Codsiyada ugufiican ee lagu soo dejisto muusikada bilaashka ah ee 2021 | Androidsis
Ignacio Sala | | Codsiyada Android, Muusig bilaash ah, Khiyaamada Android, Tababarada
Haddii aad jeceshahay inaad kala soo baxdo muusikada bilaash iyo tayo cod sare leh oo ay ku jiraan daboolida albamka, ka dib qoraalkan ayaa si gaar ah loogu qoray adiga, waana taas dhexdeeda waxaad awoodi doontaa inaad ka hesho kuwa aniga maanta ah codsiyada ugufiican ee lagu soo dejisto muusikada bilaashka ah maanta.
Marka laga reebo ku talinta iyaga oo aad uga tagto xiriir toos ah si aad u soo dejiso kuwan laba codsi oo xasaasi ah oo kaa caawin doona inaad si toos ah ugala soo baxdo muusikada bilaashka ah terminaalkaaga AndroidDhamaadka boostada iyo fiidiyowga, waxaan sidoo kale sharxayaa oo kugula talinayaa bots-ka ugu wanaagsan ee si toos ah ugala soo bixi kara muusikada Telegram iyadoon la soo dejisan codsi dheeri ah.
BAAQA: Waxaad isku dayi kartaa Amazon Music Unlimited bilaash laga soo xigtay.
1 Fildo, codsi ugufiican ee lagu soo dejisto muusig tayo sare leh
2 Ciyaaryahanka Muusiga Huawei
5 Muusikada NetEase Cloud
7 Muusikada Jamendo
8 Codsiyada lagu dhageysto muusikada si toos ah u socota
8.2 Muusikada NetEase Cloud
8.4 Muusikada Jamendo
9 Ka soo degso muusikada bilaashka ah Telegram adoo isticmaalaya bot-ka ugu fiican
Fildo, codsi ugufiican ee lagu soo dejisto muusig tayo sare leh
Hadday illaa waqti aad u yar ka hor, aniga ahaan aniga waxay ahayd dalabkii ugu fiicnaa ee si toos ah loogu soo dejisto muusigga Android-keena barnaamijka rasmiga ah ee nooca Shiinaha ee Huawei Music, Hadda wuxuu u dhaqaaqay kaalinta labaad, isagoo ku guuleystey ciyaarta si walba oo rasmi ah codsigii Fildo.
Fildo waa codsi aan martigelin nooc kasta oo ka mid ah waxyaabaha si toos ah looga soo dejinayo server-keeda, laakiin halkii isticmaal adeegga adeegga muusigga qulqulka sida Netease, VK music ama maktabada muusikada ee u gaarka ah YouTube.
Laga soo bilaabo Fildo waxaan awoodi doonaa inaan ka helno ficil ahaan wax kasta oo aan raadineyno, iyada oo aan loo eegin sida cusub, tan iyo sida ay u noqon karto si kale, hits-ka waaweyn ee waqtiga oo dhan ah ee aan waligood dhicin.
Fiidiyowga lifaaqa ah ayaan ku sharaxayaa sida loo soo dejisto arjiga, sida loo isticmaalo iyo wax kasta oo ay na siiso sidoo kale waxaan ku tusayaa sida wanaagsan ee ay u shaqeyso soo dejinta dhamaan muusikadaas aan jecel nahay si aan u dhagaysan karno iyadoon isku xirnaan shabakadeed.
Marka laga reebo tan iyo qiimaha lagu daray, taasi waa taas Codsiga rasmiga ah ee Fildo ee loogu talagalay Android waxaan sidoo kale awood u yeelan doonnaa inaan ka dhagaysanno muusigga naga xiisaynaya socodka tooska ah.
Kala soo bax Fildo for Android xiriiriyehan.
Ciyaaryahanka Muusiga Huawei
Huawei Music Player wuxuu ii sii wadaa aniga mid ka mid ah codsiyada ugu fiican ee lagu soo dejisto muusikada bilaashka ah ee ku jira Android-keena, codsi rasmi ah oo Huawei ah oo loogu talagalay boosteejooyinkiisa lagu iibiyo Shiinaha iyo taas Nooca kaliya ee sii shaqeynaya ee ka baxsan Aasiya waa midka la sameeyay Ogosto 2016 y oo aad ka soo dagsan karto isla isla xiriiriye.
Haddii aad rabto inaad aragto sida ay u shaqeyneyso, sida loo soo dejiyo oo loo rakibo, waa inaad fiirisaa fiidiyaha aan uga tagay bilowga qoraalkan. Codsi ah In kasta oo talooyinka ka muuqda shaashadda guriga ay ka yimaadeen farshaxanno Shiine ah waana sababta ay Shiinaha ugu jiraan, haddana adeegsigooda adeegsigu waa Ingiriis waana mid aad iyo aad u fudud oo dareen leh in la isticmaalo.
Haddii aad rabto inaad si qoto dheer ugu dhaadhacdo barnaamijka Huawei Music Player iyo wax kasta oo ay na siiso, waad awoodi kartaa fiiri fiidiyaha soo socda ee aan sameeyay wakhti hore taas oo aan ku sharaxayo wax kasta oo xiiso leh oo codsigan xasaasiga ah ee Android uu na siiyo.
Halkan ka degso Huawei Music Player.
Shaqada ugu weyn ee aan ka helno Snaptube waa soo dejinta fiidiyowyada YouTube, fiidiyowyada aan ku soo dejisan karno go'aanno kala duwan oo aan gadaal ka sameyn karno kala soo bax codka iyaga inaan dhageysano iyaga iyo meelkasta oo aan dooneyno iyadoon loo isticmaalin sicirka xogteena. Xadka kaliya ayaa ku jira keydinta qalabkeena.
Si looga hortago qalabkeenu inuu si dhakhso leh u buuxiyo fiidiyowyo aan u maleyneyno inaanan dib u daawan doonin, waan awoodnaa toos u soo degso codka oo qaab MP3 ahSi tan loo sameeyo, markaad gujineyso badhanka si aad u soo dejiso, waa inaan gujineynaa xulashada Xallinta oo xulo MP3.
Snaptube nooma ogola oo kaliya inaan soo dejino fiidiyowyada YouTube-ka si aan uga soo saarno codka qaab mp3 ah hadhow, laakiin sidoo kale waan u isticmaali karnaa kala soo bixi fiidiyow kasta barnaamijyada kale sida Facebook, Instagram, Veo, Dailymotion, Vimeo, Metacafe, Soundcloud ...
App Tani lama heli karo, sababo muuqda awgood, Dukaanka Play-ka, markaa waa inaan marka hore dhaqaajino rakibida codsiyada laga helo ilo aan la aqoon. Sida barnaamijyada badankood ee aan laga heli karin Play Store, Snaptube waxay soo bandhigeysaa calaamado taxane ah si horumariyaha uu ugu ilaalin karo dalabka xayeysiinta.
U soo dejiso Snaptube for Android
YTD 2 waa codsi la socda isla falsafadda sida Snaptube, maaddaama aysan kaliya noo oggolaaneynin inaan soo dejino fiidiyowyada farshaxannada aan jecel nahay, laakiin sidoo kale waxay noo ogolaaneysaa inaan kala soo baxno muusigga aan jecel nahay qaab mp3 iyo m4a ah si dhakhso leh oo fudud.
Isha aad ka helayso labada fiidiyow iyo muusiguba waa YouTube, sida Snaptube oo kale. Si ka duwan Snaptube, YDT 2 wuxuu na siiyaa laba ikhtiyaar markaan xiiseyno hees: kala soo bax video ama audio, taas oo ka dhigaysa habka soo dejinta heesaha mid aad u dhakhso badan, ka fudud kana dhib yar.
Haddii aan dooneyno inaan soo dejino muusikada ugu dhawaaqa waddankayaga, waxaan ka heli karnaa liistada halka heesaha ugu badan ku ciyaaraya wadan cayiman.
YTD 2 lagama heli karo Play Store-ka, taas oo nagu qasbeysa inaan kicino rakibida codsiyada laga helo ilo aan la aqoon. Waxaan toos ugala soo dagsan karnaa arjiga bogga abuuraha. Codsigu wuxuu mideeyaa banner yar oo hoose ee arjiga ah marka lagu daro xayeysiisyada shaashadda buuxa, boorar iyo xayeysiisyo aan saameyn ku yeelanaynin howlaha barnaamijka laakiin u oggolaanaya soo-saaraha inuu soo bandhigo cusbooneysiin.
Muusikada NetEase Cloud
NetEase Cloud Music app, oo dad badani tixraacaan Shiine Spotify, waa mid kale oo ka mid ah barnaamijyada wanaagsan ee aan gacanta ku hayno si aan ugu raaxeysano muusigga aan jecel nahay meel kasta oo aan joogno iyo in aan horay uga soo dejisannay xiriir Wi-Fi ah (doorbideyso in aan keydinno xogta moobiilka).
Codsigan, oo aan laga heli karin Play Store sababaha la mid ah Snaptube, ayaa koray sannadihii la soo dhaafay oo hadda wuxuu na siinayaa buugga wax ka badan iyo halka waxaan ka heli karnaa hees kasta oo maskaxda ku soo dhacda. Intaas waxaa sii dheer, ma aha oo kaliya noo ogolaanaya inaan kala soo baxno heesaha, laakiin sidoo kale waxay noo ogolaaneysaa inaan ku ciyaarno qulqulka.
para soo degso barnaamijkan (markii hore waa inaan dhaqaajinnay rakibaadda codsiyada laga helo ilo aan la aqoon) waa inaad booqataa isku xirka xiga oo guji nooca ugu dambeeya si aad u bilowdo soo dejinta arjiga.
TinyTunes ayaa gabi ahaanba dhinac dhigeysa nashqad si ay noo siiso suurtagalnimada soo dejiso hees kasta oo aan raadineyno ama waxaan si toos ah ugu rabnaa aaladdayada. Waxay leedahay xog-ururin ballaadhan oo aan ku hayno qormadeena isku midka ah ee aan ka heli karno barnaamij kasta oo muusig ah oo qulqulaya (keydinta masaafada).
Waxay sidoo kale na siinaysaa marin Heesaha iyo albumyada badankood lagu ciyaaro iTunes oo ay weheliso sii-deynta cusub, 100-ka hits ee xilligan sida ku cad majaladda Billboard, codadka dhawaaqa ... Waxay leedahay tab aan ka heli karno dhammaan heesaha aan soo dejinnay, heesaha aan toos uga ciyaari karno dalabka laftiisa.
TinyTunes sidoo kale lagama heli karo Play Store (dhaqaajiso rakibidda ilaha aan la aqoon ka hor intaadan rakibin), markaa waa inaan u baahanahay bogagga websaydhka saddexaad Sidee wax u socdaan. Codsigani wuxuu iskuxirayaa banner xayeysiis ah shaashadda hoosteeda, banner aan saameyn ku yeelanaynin hawlgalka barnaamijka waqti kasta oo mararka qaarna muujinaya xayeysiis shaashad buuxda ah
Jamendo Music waa codsi gebi ahaanba bilaash ah wuxuu ina siinayaa in ka badan 500.000 oo heeso, heeso aan ku soo dagsan karno hal taabasho. Si ka duwan barnaamijyada kale, Jamendo Music waxaan inta badan ka heli karnaa fannaaniin madaxbannaan, taas oo ka dhigaysa bedel aad u fiican oo lagu ogaan karo heeso iyo kooxo cusub.
Marka lagu daro noo oggolaanshaha inaan ku raaxeysano muusigga madaxbannaan, waxaan sidoo kale haysannaa awoodeena 13 idaacadood leh noocyo ay ka mid yihiin: Lounge, Electro, Hip Hop, Suugaanyahan, World Music, Jazz, Classical, Pop iyo Rock. Codsiga wuxuu ku shaqeeyaa asalka, sidaa darteed waxaan ku raaxeysan karnaa muusikada aan ugu jecel nahay shaashadda, sida haddii ay ahayd codsi muusigga ah.
Developer: Kooxda Jamendo
Codsiyada lagu dhageysto muusikada si toos ah u socota
Mararka qaar, isticmaaleyaal badan ayaa iskudaya inay raadiyaan saddexda cagood ee bisadda iyagoo raadinaya codsiyo si ay ugu raaxaystaan ​​muusigga ay jecel yihiin iyada oo aan la tixgelinaynin goobaha ugu caansan. Spotify waxay na siisaa marin u helida dhamaan muusikada muusigga oo bilaash ah oo leh xayeysiis, xayeysiisyo kuxiran waqtiga maalinta, waxay noqon karaan wax badan ama kayar.
Dabcan, haddii aad raadineyso hees gaar ah oo aad ku dhex ciyaarto koontada bilaashka ah, Spotify maahan waxaad raadineysay, maaddaama xulashadaas waxaa kaliya lagu heli karaa iyada oo loo marayo nooca bishiiba la bixiyo. Wax kasta oo kale, Spotify waa ikhtiyaar aad u fiican oo la tixgeliyo inaad ku raaxeysato muusigeenna qulqulka.
Spotify: muusikada iyo baloogyada
Qaar ka mid ah codsiyada aan ku soo sheegay qaybtii hore ee noo oggolaaneysa inaan kala soo baxno muusikada aan ugu jecel nahay mp3, ayaa sidoo kale noo oggolaanaya inaan ku raaxeysano qulqulka, adigoon kala soo dagin feylasha maqalka si toos ah qalabkayaga, iyadoo la raacayo keydinta kaydinta ee ay taasi keenayso.
Shiinekan 'Spotify' ee Shiinaha ah, sidii loogu yeeri jiray tan iyo markii uu suuqa yimid in ka badan 5 sano ka hor, wuxuu na siiyaa ficil ahaan isla buugga aan kari karno waxaa laga helaa barnaamijyada muusikada ee qulqulka badankood.
Si aad u soo dejiso NetEase Cloud Music, si toos ah ayaad u samayn kartaa iyada oo loo marayo xiriirkan, ilaa arjiga Lama heli karo Dukaanka Play-ka.
Ikhtiyaar kale oo aan haysanno oo aan hayno, haddii aan nahay dadka isticmaala Ra'iisul-wasaaraha, waa Amazo Prime Music, adeegga muusikada ee Amazon ee loogu talagalay dadka isticmaala Ra'iisul-wasaaraha. Adeegani wuxuu diyaar u yahay dhammaan macaamiishiisa in kabadan 2 milyan oo heeso ah iyo boqolaal liisaska liiska iyo saldhigyada iyadoon wax xayeysiin ah. Intaa waxaa dheer, waxay noo ogolaaneysaa inaan soo dejino heesaha aan ugu jecel nahay si aan u dhagaysan karno iyaga meel kasta oo aan joogno iyada oo aan loo baahnayn xiriir internet ah.
Muusikada Amazon: Dhageyso boodhadhka iyo muusikada cusub
Barxadda muusigga ee Jamendo Music, sidaan ku sheegay qaybtii hore, waxay diiradda saareysaa bixinta muusigga sumadaha madax-bannaan, Calaamadaha aan lahayn awoodda calaamadaha waaweyn ee raadinaya hab ay iskood ugu sheegaan noocyada codsiyada.
Jamendo Music, ma aha oo kaliya noo ogolaanaya inaan kala soo baxno heesaha aan aadka u jecel nahay, laakiin sidoo kale wuxuu noo ogolaanayaa inaan ku raaxeysano qulqulka ee buug-gacmeedka laga heli karo arjiga oo aan si toos ah uga soo dejisan karno Play Store adoo gujinaya xiriirka soo socda.
Ka soo degso muusikada bilaashka ah Telegram adoo isticmaalaya bot-ka ugu fiican
Haddii aad tahay isticmaale Telegram, hubaal waad ogtahay in barnaamijka laftiisa, midkoodna laga helo Android, iOS, OSX, Linux, Windows ama noocyada shabakadda ee ah waxa ugu fiican ee farriinta degdegga ah ee waqtiga oo dhan, waxaan awoodi doonnaa inaan isticmaal bots si aad u raadiso iyo muusikada ku soo dejiso tayo sare leh gebi ahaanba bilaash ah iyo codsiga Telegram laftiisa-
Ku biirista Beesha Androidsis, adigoo gujinaya isla xiriiriyahan, waxaad ka heli kartaa boodhadh kaas oo, sida aad ku arki karto sawirka ku lifaaqan ee ka sarreeya khadadkaas, waxaan ku siineynaa xiriir toos ah si aad u bilaabi karto bots muusikada ugu fiican Telegram oo waxaad bilaabeysaa inaad ku raaxeysato wax walba oo arjiga na siiya, barnaamij ka fog wixii codsiyada dhaqsi dhaqsi farriimaha degdegga ah noogu deeqa, waana in Telegram uu yahay mustaqbalka runta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Codsiyada ugufiican ee lagu soo dejisto muusikada bilaashka ah
La dagaallama cid aan la garanayn oo duullaan ku ah Dhulka Dagaallada Dhulka
Wiko View4 Lite oo hadda laga heli karo Isbaanishka: 6,52 "guddi, kamarad gadaal saddex-laab ah iyo Android 10